by Khalti Digital Wallet | Nov 5, 2018 | Khalti Stories
राति निन्द्रा लागेको थिएन । त्यत्तिकैमा अंकलको फोन आयो र म हत्त न पत्त कल रिसिभ गर्न तम्सिएँ । मिस कल पो हानेका रैछन् बुढाले त । हाहा! तर, काकी र बहिनीहरुको खबर नपाएको धेरै दिन भैसकेकोले आँफैले फोन गरेर कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। रातको १० बज्नै लागेछ । फोन डायल गर्नासाथ नेपाल टेलिकमबाट एउटी दिदीले मायाले सम्झाइन् “तपाईको एकाउन्टको ब्यालेन्स रकम कम भैसकेको छ, कृपया रिचार्ज गर्नुहोला।” भएन तनाव अब?
दिल्ली फोन गर्नुपर्ने । एक त फुर्सद पाइँदैन अनि त्यसमाथि आफ्नो फोनमा ब्यालेन्स नै छैन । गरम त के गरम भन्दै मेरा परम मित्र राजुलाई सम्झिएँ । मोरो फेसबुकमा अनलाइन रहेछ!
“ओए भुन्टे, मेरो फोनमा १०० रूपैयाँ हालिदेन है!” भनि मेसेज पठाएँ । डाटा प्याक मात्र छ आफुसँग, अनि कसरी जाओस त विदेश कल पनि ? साथमा पैसा नभएको त हैन, तर पसल यति बेलासम्म बन्द भैसक्छ भनि साथीलाई सम्झिएको हो ।
“तँलाई जहिले पनि त्यै नै समस्या है गधा ?” भन्दै झपार्यो पहिले त । अनि, अझै बेलिबिस्तार लगाउँदै गयो। “मोबाइलबाट नै अब सबथोक गर्न पाए पनि माग्ने बानी चाहिँ नजाने भो तेरो ? खल्ती एप चलाएको भए अहिले मलाई भन्नै पर्दैनथ्यो, बुझिस् ?”
जहिले पनि त्यहि ‘खल्ती’ को बारेमा भन्थ्यो उसले । आफूले के जान्नु के हो त्यो भनेर । ‘खल्ती’ ले यो गर्न मिल्छ, त्यो गर्न मिल्छ मात्र भन्थ्यो, अनि कसो पो गर्ने मैले नी!
मैले मायाले भनेँ, “ए मेरो भाई, अहिले गर्दिहाल्न रिचार्ज, हतार छ के! त्यसपछि बरु तेरो ‘खल्ती’ को बारेमा सबै कुरा बुझम्ला नी हुन्न ?”
नभन्दै मेरो फोनमा SMS ट्युन बज्यो । रिचार्ज गरिदिएछ केटोले ।
चट्ट दिल्लीको नंम्बरमा फोन लगाएर बेस्मारी कुराकानी गरीयो, निकै दिन भैसकेकोले ब्यालेन्स नसकुन्जेल कुरा गरिदिएँ मैले पनि।
कुराकानी सकिएपछि आज मेरो समयमा उद्धार गरिदिनुभएका मेरा असिम मित्रलाई धन्यवाद टक्र्याउन फेसबुकमा आएँ ।
“धन्यवाद रिचार्जको लागि, पैसा चाहिँ भोली लिनु है ।” मैले भनेँ ।
“बल्ल सकियो तेरो गफ? अब सुन् । खल्ती एप डाउनलोड गर् अहिले नै । अर्को पटकबाट चाहिँ मैले तेरो मोबाईल रिचार्ज गर्न सक्दिन ।“ भन्दै थर्कायो ।
तपाईं नै सोच्नुस् न, राति को समय सबै पसलहरु बन्द भैसकेपछि काम पर्यो । के गर्ने? सबैका साथी मेरा जस्ता हुँदैनन् !
अब जे भएपनि काम दिने साथी यही हो भनि म पलेटी कसी, टुप्पी बाँधेर खल्ती एप चलाउन सिक्न तयार भएँ । पहिले डाउनलोड मात्र गरेर रजिस्टर गरेको, यसो हेर्छु त फ्लाइट टिकट, फिल्मको टिकट, खानेपानी, बिजुली, मोबाइल रिचार्ज, इन्टरनेटको बिल तिर्ने लगायत सबथोकको सुविधा पो रहेछ ।
आफू भने फिदिमबाट काठमाडौँ आएको १ वर्ष भैसक्यो, अहिले भर्खर यस्तो सेवा हेर्दैछु ।
“चलाउन चाहिँ मज्जाको रहेछ, राजु । अब घर जादा प्लेनको टिकट यसैबाट काट्नुपर्ला” भनि खुसि हुँदै उसलाई र नेपाल जस्तो पिछडिएको भनेको देशमा पनि यस्तो सुविधा रहेछ भनि टेक्नोलोजीलाई धन्यवाद दिएँ ।
चलाउन यति सजिलो रहेछ कि जुनसुकै उमेर र सामान्य लेख-पढ गर्न जानेको जसले पनि यो एप चलाउन सक्ने रहेछ।
खल्तिको हालसालै आएको रिफर एन्ड अर्न बाट चिनेजानेका सबै भाईबहिनीहरु अहिले खल्ती एप चलाएर आफ्नो मोबाईल रिचार्ज गर्ने लगायत अन्य बिल तिर्ने गर्नुहुन्छ । यसले हामी सबै उमेर, भाषा भएका सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ।
मेरो चाहिँ अब खल्ती एप चलाउने बानी बसिसक्यो । समयसँगै हाम्रो भुक्तानी गर्ने शैली पनि बदलिँदैछ, हामी पनि अब बदलिनुपर्‍यो । कति रिचार्ज कार्ड कोट्याउने ? कति अरुको मात्रै भर पर्ने ? आफ्नो लागि आफै अग्रसर हुनुपर्यो नी हामी, कि कसो?
के तपाईंले अझै पनि खल्ती प्रयोग गर्नु भएको छैन ? २ मिनेटमै खल्ती आइडी खोल्नका लागि र सजिलै मोबाईल रिचार्ज लगायत सुविधा लिनका लागि यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ।
Boston Endeavor,aNational Level Management Competition by Boston International College being organ...
Watch Race 3!! Book movie ticket online in Nepal with heavy cashback